The Gardener: မြန်မာပြည်မှသယ်ခဲ့လေသတည်း။
ပထမဆုံးဖြေရတာက ယောက္ခမလောင်းဆီက အကြွေးပဲ။ ဟိုတယ် book လုပ်ဖို့ deposit ပေးဖို့မရှိတာနဲ့ အကြွေးယူလိုက်ရတယ်။
အဲဒါကြောင့် ချမ်းသာသူများသာ ရေရှည်နေနိုင်တယ်။
သိန်းခြောက်သောင်းတန်မြေကွက်ဆိုတာလည်း ဖြတ်သွားတုန်းက ခဏရပ်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ပေါ်ပူးပေါ် ဂျုံးဂျုံးဂျတ် ၀န်ကြီးရဲ့ခြံလို့ပြောတယ်။ ဒီလောက်ဈေးကြီးတာတွေဝယ်နေပြီဆိုကတည်းကိုက ပိုက်ဆံတွေသိပ်ပေါနေတာဖြစ်ရမယ်။
တစ်နေ့ကို လက်ဖက်ရည်သုံးခွက်သောက်ခဲ့ရတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးစားရင် အကို့ကိုပဲပိုက်ဆံရှင်းခိုင်းရတယ်။ စားမ၀င်ဖြစ်တယ်။ ဈေးကြီးလို့။ စင်ကာပူဒေါ်လာနဲ့ပြန်ပြန်တွက်ပြီးစားရတယ်။
ကုသိုလ်အတော်ကြီးကိုရလိုက်တယ်။ စီးမိတဲ့ တက်စီတွေက တိုက်မလို တိုက်မလိုဖြစ်လွန်းလို့ ဘုရားစာတွေ ရုတ်တရတ်ပြန်ရကုန်တယ်။ လမ်းကြီးတစ်ခြမ်းထဲခေတ်မီပြီးကွန်ကရစ်ဖြစ်နေပြီး ရှေးမူမပျက်ချိုင့်ခွက်လမ်းနဲ့ယှဉ်တွဲပြသထားပုံက တွန်တမ်ပိုရာရီ အာ့ထ် အစစ်ပဲ။
ပိုက်ဆံအိတ်ကျပျောက်တယ်။ ရှိသမျှကဒ်အကုန်ပါသွားတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ ၄၃ လမ်း ကလူငယ်လေးက ဖုန်းဆက်ပြီး ပြန်လိုက်ပေးရှာတယ်။ Singapore is OK ဆိုတဲ့ ကျွန်းမှာလို ရေအဆုံး၊ကုန်အဆုံးသမားတွေမဟုတ်ဘူး။ ရိုးသားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ၀မ်းသာစရာ။
အပြင်မှာ ဘာမှစားရတာအဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ ဟိုတယ်အမြင့်ကြီးပေါ်တက်ပြီးသောက်တဲ့ ဂျင်းနဲ့ မုန်လာဥနီဖျော်ရည်ကလည်း ကိုယ့်ဘာသာဖျော်တာလောက်တောင်မကောင်းတဲ့အပြင် ဈေးကလည်း စင်ကာပူနဲ့အတူတူလောက်ကျတယ်။ အညံ့စားသောက်ကုန်တွေကို ဈေးကြီးကြီးနဲ့ညာရောင်းတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။
စာအုပ်ဆိုင်မှာ စာအုပ်တစ်ချို့ဝယ်လိုက်တာ တစ်သောင်းခွဲလောက်ကျတယ်။ စာအုပ်ဆိုင်တွေက တစပြင်နီးနီးခြောက်သွေ့တယ်။ အရေးတဲ ငပေါတစ်ယောက်တွေ့သေးတယ်။ စာအုပ်ကြေငြာထားတာ။ ဒီခေတ်နေဆိုလား သည်ခေတ်နေဆိုလား။ စာရေးဆရာလုပ်စားတာတောင် နာမည်ကောင်းကောင်းရှာမတွေ့လို့ အတော်လေးသနားမိတယ်။ အသက်၁၁ နှစ်ပြည့်ခါနီးမောင်ခတ်နေတောင် ဟိုခေတ်နေလိုလိုဖြစ်သွားတယ်။ ကဗျာစာအုပ်တွေအများကြီးဝယ်ခဲ့တယ်။
စာအုပ်အသစ်တွေ များများမ၀ယ်နိုင်တဲ့အခါ အိမ်က စာအုပ်တွေသယ်သွားမယ်ဆိုပြီး ရွေးလိုက်တာ အုပ်နှစ်ရာလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ နောက်တော့ စင်ကာပူမှာ ဘယ်နားသွားထားမလဲဆိုပြီး တွေးမိတာနဲ့ နောက်နေ့တစ်ဝက်လောက်လျော့ရင်း အုပ်တစ်ရာလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ နောက်ထပ်လျှော့ရင်း ၇၀ လောက်ဖြစ်သွားတယ်။ အိမ်က luggage တစ်လုံးနဲ့အပြည့်စာအုပ်တွေထည့်လိုကတယ်။ လူကြုံထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ကျောက်ပြင်၊ ဟင်းထုပ်ကြီး လေးငါးထုပ်၊ သနပ်ခါးတုံး၊ ၁ ပိဿာ အလေးတွေလားထင်ရတဲ့ လူကြုံပစ္စည်းနှစ်ထုပ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဗီတိုအာဏာကြီးသုံးပြီး ဘဲဥပြုတ်ဆယ်လုံးသယ်လာပါဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းရဲ့ ဘဲဥဆယ်လုံး၊ နက်ရှင်းနယ် စီဒီကနေ ငါးရာနဲ့တန်တယ်ဆိုပြီး ၀ယ်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ စီဒီ၁၂ ချပ် (၁ ချပ်ထဲထင်လို့ဝယ်လိုက်တာ၊ ၁၂ ချပ်ဆိုတော့ ပြန်ထားခဲ့ရလည်း မ၀ယ်နိုင်လို့ထားခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြည့်ကြီးရနေမှာစိုးလို့ ၀ယ်လိုက်ရတယ်။)။ အင်္ဂလိပ် to မြန်မာ၊ မြန်မာ to English Dictionary CD ROM နှစ်ချပ်။ စတာတွေလည်းသယ်ရတယ်။ စုစုပေါင်း ကီလို ၄၀ ကျော်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ မဖြစ်နိုင်တာ ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ နပိုလီယန်လို ၀န်ထမ်းတွေရှိတယ်။
မြန်မာပြည်ပြန်တုန်းက အသိတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ကောင်မလေးကိုညာပြီး အင်္ကျီတွေ ၀ယ်ထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ဟိုကြတော့ဝတ်စရာမရှိတော့ အသိတွေအစားကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲပေးလိုက်ရတယ်။ ပြန်တော့သယ်မလာခဲ့ဘူး။ လျှပ်စစ်မီးက အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လာနေတယ်။ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရတယ်။ မီးလာနေသောရန်ကုန်။
စာအုပ်တွေကို အောက်တိုဘာပြန်မှ နှစ်ယောက် နှစ်သေတ္တာအပြည့်သယ်မယ်ဆိုပြီး သဘောတူညီမှုယူလိုက်ရတာနဲ့ သိပ်မသယ်ခဲ့တော့ဘူး။
ကိုကို (ခေတ်နေ ထင်တယ်။ သူ့နာမည်အရင်းမေ့မေ့နေတယ်။) ရေးတဲ့ စာအုပ် ငါးအုပ်ဝယ်ခဲ့တယ်။ ညီအကိုချင်း ငါးရာပဲလျှော့တယ်။ ဒီဇင်ဘာမှာ ကဗျာစာအုပ်ထုတ်တဲ့အခါကြရင်လည်း သူ့ကိုပြန်ရောင်းရမယ်။
မယ်ကိုးကို တစ်အုပ်ပေးပြီးပြီ။ ဖြိုးဖြိုးကိုတစ်အုပ်ပေးမယ်။ ဖီးရွန်ဆေးလ်ကြီး ဇကွဲနီးလောင်းကြီးကို တစ်အုပ်ပေးတယ်။တစ်အုပ်ကျန်သေးတယ်။ Starbucks တစ်ခွက်တိုက်နိုင်တဲ့ မပန်တို့၊ မဒါတို့၊ ဖိုးစိန်တို့၊မိုးကုတ်သားတို့လို လူရင်းကြီးတွေကို ဦးစားပေးပြီးလက်ဆောင်ပေးချင်တယ်။ ဖုန်းနံပါတ်မှတ်မိကြတယ်မဟုတ်လား။ ဦးရာလူဦးစားပေးပါတယ်။
ကျန်တဲ့စာအုပ်တွေကိတော့ စာအုပ်ငှားဖတ်ချင်တဲ့သူတွေကို စာရင်းပေးတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စာရင်းလုပ်တဲ့အနေနဲ့ရေးလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေအကြောင်းပြောလိုက်ရင် မဆုံးနိုင်ဘူးဖြစ်ကုန်မယ်။
၁။မြတ်ဗုဒ္ဓနည်းကျ စိတ်ကိုလေ့လာခြင်း (ဦးတင်ဦး)။ ဒီစာအုပ်ကတော့ ငယ်တုန်းက ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေကို အမှတ်တရ ဓမ္မဒါနအနေနဲ့ ကောက်နှုတ်ချက်တွေကူးရေးပေးခဲ့ဖူးတဲ့စာအုပ်ပါ။ အတော်လေးသဘောကျပါတယ်။
၂။ရှားလော့ဒေ၀ီ (တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်)၊ ကဗျာရှည်သုံးပုဒ်ကို မြန်မာကာရံစနစ်နဲ့ဘာသာပြန်ပါတယ်။ ငယ်တုန်းကတည်းက မကြိုက်တာ ကြီးလာတော့လည်းမကြိုက်ဘူးပဲ။ သိပ်ကို consistent ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ခံစားရပါတယ်။ အပိုတွေထည့်ပြီးဘာသာပြန်တာကို မခံစားနိုင်ဘူး။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာကို အင်္ဂလိပ်တစ်ယောက်လိုတော့ ခံစားနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ ပြီးတော့ နိမိတ်ပုံတွေကို ဘာသာပြန်လိုက်ရင် သိပ်ကိုဝေးသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဘာသာပြန်တာမကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ ဘာသာစကားတွေရဲ့မတူညီမှုကြောင့်ပဲ။ သူတို့ရဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဆောင်းရာသီ ဆိုပါတော့၊ ကျွန်တော်တို့အတွက်က ဆောင်းကို ဆိုးတယ်လို့ မခံစားနိုင်ဘူး။ အေးတာကမှမတူတာကိုး။ အဲဒီလို အခြေခံအချေက်အလက်မတူတာတွေက အသေးအဖွဲပါ။ ကဗျာကို ဘာသာပြန်တာကို ကဗျာဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ မယုံတာကတော့ ငယ်ကတည်းက စွဲနေတဲ့အသိဖြစ်လို့ အခုလည်း ဘာသာပြန်ကောင်းသော စာသားများလောက်အထိပဲလက်ခံပါတယ်။
၃။ ညိုသစ်ငယ်စီစဉ်တဲ့ မြန်မာကဗျာ ၂၀၁၀ ဆိုတဲ့စာအုပ်။ ကဗျာဆရာ ၁၆၃ယောက်ရဲ့ကဗျာ။ ပေါလိုက်တဲ့ကဗျာဆရာဦးရေဆိုပြီးတော့တောင်လန့်သွားတယ်။ အရည်အတွက်အရတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ကဗျာဆရာ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ အာရှမှာတောင် တရုတ်လို၊အိန္ဒိယလို နိုင်ငံကြီးတွေမရှိရင် အများဆုံးဖြစ်လောက်တယ်။ ကဗျာစာအုပ်ကို လေးထောင်နဲ့ရောင်းတာကတော့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာ အိုကေပါ့မလားတောင်တွေးမိတယ်။ စီစဉ်တဲ့သူတွေကို အဆင်ပြေစေချင်တယ်။ ကဗျာတွေကို ရှင်သန်စေချင်တယ်။ ဈေးကွက်မှာရော၊ နှလုံးသားတွေထဲမှာပါ ကဗျာကို ရှင်သန်စေချင်တယ်။ ကဗျာစာအုပ်က အမေပေးလိုက်တာမို့လို့၊ လေးထောင်လောက် အမွေရလိုက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။
၄။ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ခွာသံ(တာရာမင်းဝေ) ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်။ ပလတ်စတစ်ဖုံးထားတယ်။ အသစ်အတိုင်းပဲ။တစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးသား၊ငယ်တုန်းက လုပ်ထားတဲ့ တံဆိပ်တုံးလေးနှိပ်ထားတယ်။အခုတော့စာအုပ်တွေအားလုံးက တန်ဖိုးသိပ်မြင့်သွားပြီ။ နာဂစ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့သော စာအုပ်အသစ်ကြပ်ချွတ်များဖြစ်ကုန်ပြီ။ ဒီစာအုပ်ကိုဝယ်ထားတာ ၂၀၀၅ ဇန်န၀ါရီ။ စာအုပ်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်မကိုင်တတ်တဲ့သူတွေ လာကြည့်လို့ရတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်ရိုရိုသေသေသိမ်းထားလို့ရသလဲဆိုတာကိုပါ။ ခြတွေရန်တွေက ကာကွယ်ရ၊မိုးရေစိုတာကာကွယ်ရတွေကြားက အသစ်အတိုင်းကျန်နေတော့ အတော်လေး ပျော်သွားတယ်။ အိမ်ကလူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ မောင်သိန်းဇော်ရဲ့ကဗျာပေါက်စလေးကိုတွေ့ရတယ်။ အလွတ်ရနေတဲ့ကဗျာလေးပါပဲ။
၅။ ကျွန်တော်နှင့်ဆောင်းရာသီ ဒဿန(တာရာမင်းဝေ)
ငယ်တုန်းက သိပ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့စာအုပ်လေး။ နာဂစ်မှာရေစိုပြီး တစ်စစီပြုတ်ထွက်နေတာကို အမှတ်တရပြန်ယူလာတယ်။ အခုတော့ သေချာပြန်စီပြီးတစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်ပြီးပြီ။ကြိုက်တုန်းပဲ။
၆။ခေတ်နေအတွက်စာတစ်ရွက်(တာရာမင်းဝေ)။ တာရာမင်းဝေလို့ပဲနာမည်တပ်ထားပေမယ့် ဒီစာအုပ်ကို သူ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးရေးထားတာဖြစ်လို့ မိဘတွေက သားသမီးကို အကောင်းဆုံးပေးလိုက်တဲ့အမွေအနှစ်ပဲလို့ခံစားရတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကိုလည်း သိပ်ကြိုက်တယ်။ တစ်ချို့ဟာတွေအလွတ်နီးနီးရနေတုန်းပဲ။ ဥပမာ၊ ရွှံ့ကြောင့်ငါးရှဉ်ှုချောင်းမဆိုးဘူးဆိုတာမျိုး။
၇။ယောနသံစင်ရော်(ဘသန်း ဓမ္မိက)။ အကြိုက်ဆုံးစင်ရော်လေး။ ခြောက်တန်းကနေ ဆယ်တန်းအထိ နေ့တိုင်းလောက်ဖတ်နေဖြစ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်။ အဖေ့ရဲ့လက်ဆောင်။
၈။အမြင့်သို့အာရုံညွန့်တက်ခြင်း(သို့မဟုတ်) ကဗျာ ၊တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်။
အဲဒီစာအုပ်ကိုလည်း ငယ်တုန်းကကြိုက်တယ်။ အခုပြန်ဖတ်ဖို့ပြန်ယူလာခဲ့တယ်။ ကဗျာအကြောင်းပါပဲ။ တခြားလူတွေရဲ့အမြင်ကိုများများသိရတာကောင်းတယ်။ အထူးသဖြင့် ကဗျာနဲ့ပတ်သက်ရင် စိတ်က လောဘကြီးလွန်းတယ်။ များများသိပ်သိချင်တယ်။
၉။ခေတ်ပေါ်အချစ်၊ ခေတ်ပေါ် ကဗျာ (မောင်သာနိုး)။ ဆရာမောင်သာနိုးဘာသာပြန်တဲ့ကဗျာတွေပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ သူရေးတဲ့ကဗျာတွေမကြိုက်သလောက်၊သူဘာသာပြန်ပေးတာတွေကိုတော့ သိပ်ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဆရာမောင်သာနိုးရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ဆီမှာ စာသင်ခဲ့ရသေးတဲ့အတွက် ဆရာဖိုးဖိုးလောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းသင်နိုင်တဲ့ဆရာအနည်းငယ်ထဲကတစ်ယောက်ပါပဲ။ ရစ်သမ်အကြောင်းစာအုပ်ကတော့ နာဂစ်မှာများ ပါတော်မူသွားသလားမသိပါဘူး။
၁၀။ကာ(ဖ)ကာ၏အရေးအသားများ (မြင့်သန်း ဘာသာပြန်မှတ်ချက်ရေး၍ တည်းဖြတ်သည်)ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါ။ တော်တော်လေးငယ်ကတည်းက ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မုံရွေးစာစဉ်၈၅ ဖြစ်ပါတယ်။ မုံရွေးကထုတ်တဲ့ပေါချောင်ကောင်း စာအုပ်တွေကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဈေးသက်သာတာနဲ့ဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆရတဲ့စာစဉ်တွေအတွက် မုံရွေးကလူတွေကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြင့်သန်းကို အဲဒီအချိန်တွေကတော့ လူတကာနဲ့ရန်ဖြစ်နေတဲ့စာပေဝေဖန်ရေးသမားလောက်ပဲသိပါတယ်။ သူဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ၊ သူရေးတဲ့စာအုပ်အတွက်တော့ သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့မူပါပဲ။ သူရေးတဲ့ဆောင်းပါးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်။ ကြိုက်တာလည်းရှိသလို မကြိုက်တာလည်းရှိပါတယ်။ သူဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုတော့ အတော်လေးကြိုက်ပါတယ်။ တစ်အုပ်က ဒီစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။သိမ်းထုပ်ထားတဲ့လွင်ပြင်ကျယ် ငြိမ်းအေးအိမ် ။ သရဖူခေတ်က စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးတဲ့သူတော်တော်များများက သူ့ဝတ္ထုတိုတွေကိုလေးစားကြပါတယ်။ ဒီစာအုပ် အမြင်ကျယ်တဲ့လူလတ်တစ်ယောက်အရွယ်က ရေးခဲ့တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အနုပညာနဲ့ယှဉ်ရင် အလွန်နည်းတဲ့စာကို ရေးခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အခုလည်း fb မှာ ဓာတ်ပုံတွေ အနုပညာမြောက်စွာရိုက်တင်ထားပြန်တော့ အနုပညာသမားတစ်ယောက်ရဲ့ သိမ်းထုပ်ထားတဲ့လွင်ပြင်တစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်တောင်ကျယ်ဝန်းမလဲတွေးမိပါတယ်။ အခုခေတ်မှာလို အသုံးမကျလှတဲ့စာတွေ စာမျက်နှာပေါ်မှာတွေ့နေရတိုင်း သရဖူခေတ်က စာပေအားဖြင့် ရွပ်ရွပ်ချွံချွှံအောင်မြင်ပြီး စီးပွားရေးအားဖြင့် ခွက်ခွက်လန် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ စာတွေကို လွမ်းဆွတ်မိပါတယ်။ အားလုံးဟာ တက်ညီလက်ညီ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် သရဖူကနေ တာရာမင်းဝေ၊မင်းခိုက်စိုးစန်၊ငြိမ်းအေးအိမ် သုံးယောက်ဟာ အတောက်ပဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း စာသိပ်မရေးကြပေမယ့် ရေးခဲ့တဲ့စာတွေက အဆင့်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ နာရီများကို ဆွတ်ယူမြည်းစမ်းခြင်း နဲ့ ဓားတစ်စင်း၏ အလျားကိုပြန်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအထိ နွေးထွေးနေသေးတဲ့စာတွေ၊ ၂၀၀၀ January ကထုတ်ပါတယ်။ အခုဆို စာအုပ်ဟာ ၁၁ နှစ်ကြာပါပြီ။ အသစ်အတိုင်းပါပဲ။ အိမ်မှာရှိတဲ့ အခိုးမခံလိုက်ရတဲ့စာအုပ်တိုင်းဟာ သိပ်ကိုသပ်ရပ်ပါတယ်။ ဆယ်တန်းတွေကို စာသင်လို့ရသမျှပိုက်ဆံတွေကို ပလာတာစားတာ၊လှူတာနဲ့ စာအုပ်ဝယ်တာတွေအတွက်ပဲသုံးခဲ့ပါတယ်။ ရသမျှဟာ စာအုပ်ဖိုးနဲ့တင် အတော်လေးကုန်တာများပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကို ၀ယ်ဖတ်ဖို့ အမေက ငယ်ကတည်းက သွန်သင်ခဲ့တာကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ စာအုပ်ကို ဖတ်ရင် မခေါက်ရပါဘူး။ စာအုပ်ကို ကိုင်ပြီးဖတ်ရင်လည်း မြဲမြဲမြံမြံကိုင်ရပါတယ်။ ငယ်တုန်းက သင်ပေးခဲ့တဲ့အကျင့်တွေဟာ အခုထက်ထိမြဲပါတယ်။ ကြီးလာမှလုပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေလို သတိထားနေစရာမလိုဘဲမြဲပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း စာအုပ်ပြန်ဖတ်ရင်းတွေးမိပါသေးတယ်။
၁၂။ ကျွန်မကိုပြန်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်မရဲ့အရိပ်။(ဂျူး) မဂျူးဘာသာပြန်ထားတဲ့သီချင်းတွေပါ။ သဘောကျပါတယ်။ ဂျူးစာအုပ်တွေအားလုံးနီးပါးအကောင်းအတိုင်းရှိနေသေးတာမြင်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ နာဂစ်ကြောင့် နှစ်အုပ်ပဲပျက်စီးသွားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်း ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့သဘောကျနေတုန်းပါပဲ။
၁၃။တီဗီဖန်သားပြင်ကြီးဖွင့်လျက်(မောင်ယုပိုင်)။ ကျွန်တော်လေးစားတဲ့လူငယ်ကဗျာဆရာနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ လေးစားတယ်ဆိုတာ ရေးသမျှကြိုက်တယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူး။ စိုင်းဝင်းမြင့်နဲ့မောင်ယုပိုင်ပါ။ သူတို့တွေဟာ ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူလောက်တွေပါ။ အနုပညာဖြစ်ဖြစ်၊ တရားရဖို့အားထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊လူငယ်တွေကိုပဲကြိုက်ပါတယ်။ ပါရမီကိစ္စတွေနည်းနည်းဖယ်ထားလိုက်ရင် အချိန်ပိုရတဲ့သူက ပိုလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုလည်း ပိုသစ်တာတွေမျှော်လင့်ပါတယ်။ မဖတ်ကြည့်ရသေးပါဘူး။ ခေတ်တစ်ခုမှာ မွန်းကြပ်မှုအတူတူကြုံခဲ့ကြတဲ့ တစ်ခြားတစ်ယောက်ရဲ့အရေးအသားကို ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့မခဲယဉ်းပါဘူး။ ဒဏ်ရာအတူတူရထားကြတဲ့ သားရဲတွေလို သူ့ဒဏ်ရာတစ်ချို့ကိုလည်း ကဗျာထဲကနေမြင်ရင်မြင်ရလိမ့်မယ်။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လောကဓံရဲ့ အနှေးရိုက်ချက်တွေပါမယ်ဆိုတာပါပဲ။
၁၄။အငြိမ့်(သုခမိန်လှိုင်)။ နှစ်ခုစလုံးကြိုက်လို့ဝယ်လာတာ။ ဦးလှိုင်ကဗျာနဲ့ နေမျိုးဆေး sketch.
၁၅။အင်ဒီဝါးဟိုးလ်တို့ကမ္ဘာ။ သုခမိန်လှိုင်။ ကြိုက်လို့ဝယ်လာတာ။ ကဗျာတွေက အလွတ်နီးပါးရနေပြီ။
၁၆။ကီလီမန်ဂျားရိုး။ ဇေယျာလင်း။ ဖတ်ကြည့်ဖို့ဝယ်လာတာ။
၁၇။၂၀၀၇။ ဇေယျာလင်း။ ဖတ်ပြီးသား။ပြန်ဝယ်စုထားတာ။
၁၈။ နန္ဒာသိန်းဇံ ။ ထေရ၀ါဒနှင့်ပတ်သက်သောမှတ်ချက်များ။ သုံးလေးခါဖတ်ပြီးသား။ ပြန်သယ်လာခဲ့တယ်။
၁၉။ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ (မောင်ဆန္ဒ လယ်ဝေး)။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်ဘ၀မှာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါဆုပန်တာတွေအကြောင်းပါ။
၂၀။Uri Geller's little book of mind power စိတ်စွမ်းအားကျမ်းငယ်။ဆယ်မောက်ဘာသာပြန်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို အမှတ်တရဆိုပြီး တစ်အုပ်လုံးလက်ရေးနဲ့ကူးပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ငယ်တုန်းက အဲဒီလို အမှတ်တရလေးတွေလုပ်ပါတယ်။ ကြီးလာမှသာ စိတ်ကောင်းနည်းသွားပုံရပါတယ်။ ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေမွေးနေ့မှာ အမှတ်တရဖြစ်အောင်ဆိုပြီး၊ မဟာမြိုင်ဆရာတော်ရဲ့ Quotes တွေ ဗလာစာအုပ်နဲ့တစ်အုပ်စာကူးပေးလိုက်တာတို့ဘာတို့လုပ်ပါတယ်။
၂၁။ဘေးမှနေ၍အားပေးခြင်း(လူးစယွန်၏ ၀တ္ထုတိုများ -၁ မြင့်သန်းဘာသာပြန်၍ ရှင်းလင်းချက်ရေးသည်။) ဟိုတလောက လူရွှန်းစာအုပ်တစ်အုပ်ဝယ်လာတောဲ့အဲဒီတစ်ပုဒ်အကြောင်းကို ကြားဖူးနေသလိုဖြစ်နေတာ အိမ်ရောက်တော့ မြင့်သန်းစာအုပ်ကြည့်လိုက်မှသဘောပေါက်သွားတယ်။ တစ်ယောက်က လူရွှန်းလို့အသံထွက်ပြီးတစ်ယောက်က လူးစယွန်ဆိုလို့ ဦးနှောက်ကလည်းဆက်စပ်မတွေးနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားပုံရတယ်။
၂၂။ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား(ထွန်းဝေ၀မြင့်) ။ တဂိုးကဗျာကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ကြိုက်လောက်တယ်။ ရိုးရိုးနဲ့ချစ်စရာကဗျာလေးတွေ။
၂၃။ကျွန်တော်နှင့် အခြားသူတို့၏အကြောင်းများ(မြင့်သန်း) ပြန်ဖတ်ဖို့ယူလာတာ။
၂၄။မြသန်းတင့်။ ရေပွက်ပမာ။ ဆီမွန်ဒီဗူးဗွားရဲ့ A very easy death ပါ။ သိပ်ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။
၂၅။ဖန်ခွက်ထဲကဟာသများ။ ညီသစ်။ အရက်သမားဟာသတွေ။ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြဖို့။
၂၆။ကောင်းကင်နဲ့မလွတ်တဲ့တောင်ပံတစ်စုံ။ မင်းခိုက်စိုးစန်စာအုပ်တွေထဲမှာ ဖတ်လို့အဆင်ပြေတာ နှစ်အုပ်ရှိပါတယ်။တစ်အုပ်က ဒီစာအုပ်ပါ။သူမသေသေးပေမယ့် ဒီစာအုပ်ကို သူ့ရဲ့မာစတာပိစ်လို့သတ်မှတ်နေမိပါတယ်။ သုညမှာ ဇာတ်ကောင်တွေက အလေးအနက်လုပ်မထားတဲ့အတွက် တစ်ချို့အခန်းတွေသိပ်မကြိုက်ဖြစ်ရလို့ သုညကို ကောင်းကင်နဲ့မလွတ်တဲ့တောင်ပံတစ်စုံက ၀တ္ထုတိုတွေလောက်မကြိုက်ပါဘူး။ မင်းခိုက်စိုးစန်ကို
စိတ်အင်နားရှား ဆိုတဲ့ short story လေးနဲ့မှတ်မိနေပါတယ်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဇန်န၀ါရီလမှာထုတ်ပါတယ်။
၂၇။ကျိုက်ဝိုင်းစစ်တမ်း။ဇော်ဇော်အောင်။ ဒီစာအုပ်ကလည်း တကယ့်နာမည်ကြီးပါပဲ။ ပြန်ဖတ်ဖို့လိုလို့ပြန်ယူလာပါတယ်။
၂၈။A Map of the Journey။ ဆရာတော်ရဲ့ ဒုတိယမြောက် အင်္ဂလိပ်စာအုပ်။ ဒီကိုလာခါနီးမှာ တစ်ဝက်လောက်ပဲဖတ်ရသေးတယ်။ သယ်မလာဖြစ်တာ အခုမှပဲသယ်နိုင်တော့တယ်။
၂၉။ကျွှန်တော်နှင့်နွေယဉ်စွန်းတန်း။တာရာမင်းဝေ။ တာရာမင်းဝေရေးတာကို အမေဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ ထွန်းဝေမြင့်က သရုပ်ဖော်ပုံဆွဲပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သံလျင်မှာကျောင်းတက်တုန်းက ကျောင်းစာအုပ်သာမပါလာရင်နေမယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကတော့ အမြဲလိုလိုပါလာတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဥယျှာဉ်မှုးတွေက ရဲရင့်ကြတယ်ဆိုတဲ့ ပထမ ဆုံး သတ္တိ ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကို အခုအထိ စိမ့်ဝင်မှတ်မိနေတုန်းပါပဲ။
၃၀။လွင့်မျောနေသောကမ္ဘာကြီး၏ အနုပညာသည်တစ်ဦး (မြင့်သန်း ဘာသာပြန်။ An Artist of the Floating World, Zuo Ishiguro, Whitbread book of the year 1986. ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ဖတ်နေပါတယ်။
၃၁။ဘယ်သို့လွမ်းရပါ့။ မြ၀င်း(ဒဿန)ရဲ့ စာအုပ်သေးသေးလေးပါ။ တွေးစရာတွေကို ယဉ်ယဉ်လေးရေးထားတာကိုသဘောကျပါတယ်။
၃၂။မင်းခိုက်စိုးစန်။ ကြက်တူရွေး ပါးစပ်။
၃၄။မင်းခိုက်စိုးစန်။ စိတ်ကောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ၀တ္ထုတွေကတော့ စာဖတ်ရတာပျင်းသလောက် ကျွန်တော်ရေးထားသမျှကိုလည်း အဆင့်မီတယ်မထင်တဲ့ ချစ်လှစွာသော ဇကွဲနီးလောင်းကြီးဖတ်ဖို့ပါ။ Blog ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်က တစ်ကြိမ်ဖတ်ခိုင်းတာကို မကြာသေးမီက ပို့စ်တစ်ခုဖတ်ပြီး ပျင်းလို့ဆက်မဖတ်တော့ဘူးလို့အားရ၀မ်းသာပြောပါတယ်။ အားတက်စရာ။
၃၇။Collin Cobuild grammar
၃၈။ခေတ်သစ်တစ်ခု၏အစ အဓိပ္ပာယ်များ၏အဆုံး။ မင်းခိုက်စိုးစန်။ ဆောင်းပါး။
၃၉။ဘာကိုတန်ဖိုးထားရမလဲ။ ဆရာတော် ဦးဇောတိက။
၄၂။ ကျွန်တော်နှင့်ကြေးသွန်းယဉ်ကျေးမှု။ ငယ်တုန်းက ချစ်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတိုတွေ။
၄၃။ သူဖတ်သောစာ၊သူရေးသောစာ။ မြင့်သန်း။ ကိုယ်လည်းဖတ်ကြည့်မလားလို့ပါ။
၄၄။လူငယ်တစ်ယောက် ရဲ့ကျောက်ထွင်းရာဇ၀င်။ တာရာမင်းဝေ။ အလှပဆုံးဝတ္ထုတိုသုံးပုဒ်ပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒီလောက် လှအောင်ရေးနိုင်ဦးမလား သံသယရှိပါတယ်။ ပန်းခေတ်ကလမင်း၊ ရွှေဖိနပ်မှာအစိမ်းရောင်ကြက်ခြေခတ်နဲ့ကောင်မလေး။(အခုတလောထွက်နေတဲ့တာရာမင်းဝေယောင်ယောင်ငနဲတွေက ခုံဖိနပ်မှာ သံမှိုပျက်လေးနဲ့ကောင်မကြီးဆိုပြီးပြန်ရေးမယ်ကြားပါတယ်။)သင်နှင့်နံနက်ခင်းကိုသာဝင်ခွင့်ပြုမည်၊ငါ့ရင်ခွင်ကြားကနှင်းဆီဓားသွားတစ်လက်၊ ပန်းလက်ဖ၀ါးမှာပါးအပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ကောင်မလေး စတဲ့လုံးချင်းတွေဟာ ဒီဝတ္ထုတိုသုံးပုဒ်ရဲ့အငွေ့အသက်မကင်းပါဘူး။ ဒီစာအုပ်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ငယ်ချစ်ပါပဲ။
၄၅။ Snow in the Summer. ဆရာတော့်ရဲ့ ပထမ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ပါ။
၄၆။ စေ့ထားသော တံခါးများ။ သက်လုံ။ တောက်တယ်ကျင်းကို ဆရာသက်လုံက အရှင်းဆုံးရေးသွားခဲ့ပါတယ်။
၄၉။သစ္စာနီ။ ကျွန်ုပ်နှင့် တောသုံးတောင်၏ သစ်ရွက်များ
၅၀။သစ္စာနီ။စကားလုံးများနှင့်ဆော့ကစားခြင်း။ သစ္စာနီစာအုပ်တွေကို ဘယ်စာအုပ်ယူသွားရမလဲဖတ်ကြည့်ရင်း တော်တော်များများသယ်လာဖြစ်သွားတယ်။
၅၇။သစ္စာနီ။ စက္ကူပေါ်က သစ်ပင်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ။
၅၉။ သစ္စာနီ။ အခြားသော အရာများနှင့်လူ။
၆၀။ သစ္စာနီ။မြင်စိုင်းသူမြား။ ကဗျာ။
၆၁။သစ္စာနီ။မိမိအရေပြားမှလမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်း။ ကဗျာ။ အဲဒီတုန်းက ရှစ်တန်းပဲရှိသေးတယ်။ အကိုတွေဝယ်လာတဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကြိုက်နေမိတယ်။ ခဏခဏဖတ်ဖြစ်တယ်။
၆၅။ အသက်ရှင်နေလျက် ဘ၀သေနေသူ။ ဆရာတော်ဦးဇောတိက။
၆၆။ ဆိုင်းသံဗုံသံမပါသော အက္ခရာများ။ တာရာမင်းဝေ။
၆၇။ ဇော်ဇော်အောင်။ ပို့စ်မော်ဒန် သီအိုရီများ။
၆၈။ သစ္စာနီ။ ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ကဗျာ။
၆၉။ တာရာမင်းဝေ။ ကုန်းကိုက်ခံရတဲ့ ... အဲလေ။ စုန်းကိုက်ခံရတဲ့သစ်သီး။
၇၀။အုပ်ခုနစ်ဆယ်မြောက်က ဘာစာအုပ်ထင်သတုန်း တကာကြီး၊ဒဂမာ့ဂျီးစ်တို့ .... အားလုံးပဲမှားပါတယ်။
အဲဒီစာအုပ်တွေယူလာခဲ့ပါတယ်။ အချိန်အခက်အခဲအရအသေးစိတ်မရေးတော့ပါဘူး။ စာအုပ်တွေကိုချစ်တဲ့အတွက် ငယ်ကတည်းကလည်းပိုက်ဆံမရှိပါဘူး။ စာအုပ်တွေပဲရှိပါတယ်။ အခုလည်း ပိုက်ဆံမရှိပါဘူး။ စာအုပ်တွေနဲ့ အကြွေးတွေပဲရှိပါတယ်။
ငယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့တာတွေကို ဒုတိယအကြိမ်ပြန်သုံးသပ်ဖတ်ရှုရင်း ကျေနပ်မိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ကို အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားသုံးမျိုးမှာဖတ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ စာဖတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့ အက်ဆေးတစ်ခုမှာ ရေးထားတာဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်လည်းမှန်ပါတယ်။ ရသခံစားမှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာကို သတိထားမိပါတယ်။ ငယ်ဘ၀ကိုလည်း ပြန်သတိရစေပါတယ်။
Terms and Conditions: 2day is an April Fools Day!!!
ကွှန်ချက်ပြခြင်း။ ဒီနေ့မှာ မလုပ်နိုင်တဲ့ ကတိတွေများများပေးပါ။